Motorola ga -ewetara Moto P30 na Ọgọst 15 | Androidsis
Edere Ferreno | | Motorola, Noticias
Motorola nwere ọtụtụ ụdị na -echere, mana ekpughere ụdị ekwentị ọhụrụ na mberede na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịmalite n'oge adịghị anya. Ọ bụ maka Moto P30, nke ọ nweghị ihe gbapụrụ ma ọ bụ mara Ruo ugbu a. Na ngosipụta ekwentị ọhụrụ a sitere na ụlọ ọrụ ahụ ga -ewere ọnọdụ n'ime ụbọchị ole na ole.
Ngụkọta ụdị atọ bụ akụkụ nke ụdị Moto P30 a nke ụlọ ọrụ ahụ. Ekwentị ka bụụrụ anyị ihe omimi zuru oke, n'ihi na ugbu a enweghi data ọ bụla na ha n'ihe akọwapụtara.
Kedu ihe asịrị na a ga -egosi ezinụlọ a nke ekwentị Motorola na Ọgọst 15. Ọ bụkwa otu ụbọchị ka ewepụtara Moto Z3 na China, ebe ọ dị ka aga -eme ngosi a. Agbanyeghị na enweghị nkwenye na nke a ruo ugbu a.
Dị ka anyị kwuru, enwere ngụkọta nke ụdị atọ. Anyị na -achọta Moto P30, P30 Play na P30 Note. Ekwentị atọ, nke ọ bụla ga -enwe nkọwa dị iche iche, ma ọ bụ opekata mpe, nke ahụ bụ ihe ekwesịrị. Mana onweghị ihe a maara na nke a ugbu a.
Ọ bụ nnukwu ihe ijuanya na a na -ezobe ha ogologo oge. N'ihi na, enwere ọtụtụ ndị na -agbagha izi ezi nke ozi a, ma ọ bụ ọ bụrụ na ekwentị dị. Mana Motorola n'onwe ya agọnarịghị ihe ọ bụla gbasara Moto P30 ndị a.
Yabụ na anyị ga -eche ụbọchị ole na ole. N'ezie tupu August 15 anyị ga -enweta data gbasara ụdị ekwentị ọhụrụ a. Yabụ na anyị ga -amatakwu. Ma ọ bụghị ya, ichere ahụ ga -adị mkpụmkpụ n'ime naanị ụbọchị anọ anyị ga -enwe ike ịhụ ụdị Moto P30 ọhụrụ a nke ụlọ ọrụ ahụ na -akwado.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Enwere ike igosi Moto P30 ohuru na August 15
Sony na-ekpughe ekwentị ndị ga-ebu ụzọ melite gam akporo 9.0 achịcha